Indlu yaselwandle i-Irene enegadi ukuya kuthi ga kwi-5 yabantu - I-Airbnb
Indlu yaselwandle i-Irene enegadi ukuya kuthi ga kwi-5 yabantu
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguPromitheus
-Ulwandle oluthandekayo lwesanti ngaphakathi kwemizuzu embalwa yokuhamba ukusuka endlwini
-Indlu yasehlotyeni enegadi evaliweyo kunye nemithi yeziqhamo enomthunzi
- Indawo ezolileyo, kude nokhenketho oluninzi
Amanyathelo ambalwa ukusuka elunxwemeni (i-80 m.), Ejikelezwe ngamahlathi omnquma, indlu yelizwe elinokuthula (ukuya kwi-5 P.) Ijikelezwe yigadi enkulu enemithi kunye neentyantyambo ezininzi kwindawo ezolileyo neluhlaza.
Igumbi lokuhlala elikhulu elinesofa ekhululekile (ibhedi yesofa yomntu we-5), indawo yomlilo kunye neTV, itafile yokutyela kunye nezitulo kunye nekhitshi elixhotyiswe kakuhle (Isitovu esikhulu sombane esine-oveni, i-extractor hood, ifriji enefriji, iketile, itoaster kunye nomenzi wekofu) .
Igumbi lokuhlambela elineshawa, indlu yangasese, isinki kunye nomatshini wokuhlamba.
Amagumbi amabini ahlukeneyo anebhedi enye kunye neebhedi ezimbini ezingamawele.
Umoya womoya, i-wi-fi ye-Intanethi.
Iveranda enkulu enamacala amabini enefenitshala yangaphandle kunye neembono kwindawo entle eluhlaza.
Kwigadi yothando kukho iilounger zelanga, ujingi, imithi yeziqhamo eyahlukeneyo kunye nendawo yokupaka imoto yakho.
Abamkeli bakho uAntigoni noGiannis bajonge phambili ekwamkeleni
Ekufikeni kwakho, isidlo sangokuhlwa esamkelweyo esibandakanya ukutya okushushu (isaladi, ikhosi enkulu, i-feta, iminquma) kunye newayini eyenziwe ekhaya ikulindile. Ukususela kwi-10 yeentsuku zokuhlala, u-Antigoni no-Giannis baya kukuvuyela ukukupheka ngexesha elinye. Kwindlu yakho uya kufumana iziqhamo kunye nemifuno yamaxesha onyaka emitsha kwimveliso yazo, ijam yasekhaya, isonka kunye nejusi.
Ukuba ithuba livela, unokubukela kwaye usincede sivelise iitumato ezomileyo, amakhiwane omisiwe okanye ezinye iimveliso zasekhaya.
Umbuki zindwendwe ngu- Promitheus
Siyafumaneka kwiindwendwe zethu ubusuku nemini kwaye sijonge phambili ekutyebiseni iiholide zabo eCorfu ngolwazi lwasekhaya.
Jonga kuphononongo lwethu lwendlu kwi:
Jonga kuphononongo lwethu lwendlu kwi…
Inombolo yomthetho: 0524001